अफिसियल महिलामा मोटोपनको समस्या – Saurahaonline.com
अफिसियल महिलामा मोटोपनको समस्या
सौराहा अनलाइन | २०७६, १६ आश्विन बिहीबार
एजेन्सी : मोटोपन धेरैको समस्या हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अनेकानेक प्रयास समेत असफल भएर धेरै मानिसहरु उदासिन बनेका पनि धेरै उदाहरणहरु पाईन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी एक संस्थाले गरेको रिपोर्टले भने घरबाहिरको काममा सक्रिय हुने महिलाहरु धेरै मोटोपनको शिकार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
कसरी रहने फिट रु
– खाने कुरा छनोट गर्दा कार्बोहाईड्रेडको मात्रा कम हुनुपर्दछ । जसको कारण शरीरको तौल कम गराउन मद्दत पुग्दछ ।
– कुनैबेला भोक लाग्छ भने त्यतिबेला पेटभर खाना खानुपर्दछ । तर, कार्बोहाईड्रेड कम गराउनुको साथै फ्याट कम गर्नु हुँदैन । कम मात्रामा नौनी र घिऊ खानुपर्दछ ।
उपचारपछि निकाे भएका पुरुषको विर्यमा भेटियाे काेरोना भाइरस ! २०७७, २७ बैशाख शनिबार
शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु ! २०७७, २३ बैशाख मंगलवार